Tatitra avy amin'ny Chinaplas 2018 sy Suzhou Jwell andro misokatra - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Tatitra avy amin'ny Chinaplas 2018 sy Suzhou Jwell andro misokatra
Fotoana: 2018-04-25 Hits:
Amin'ny maha orinasa lehibe ny indostrian'ny milina fitrandrahana, Jwell Masinina dia mikendry ny hisisika, hiady ary hanavao, hifantoka amin'ny traikefan'ny mpanjifa, hananganana ekipazy ekipa fitaovana fitrandrahana eran-tany! Tamin'ny Chinaplas 2018, niady an-dalambe ny sangany Jwell….
Andro misokatra Jwell
Mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifanay ny fomban'ny kanto Jwell sy ny fahaizany manamboatra Jwell, Suzhou Jwell dia nanokatra ny hetsika ho an'ny andro misokatra mandritra ny Chinaplas 2018, izay ahafahan'ny mpanjifa manerantany manatona ny orinasa. Andao hodinihintsika izao ny hetsika mahavariana amin'ny andro malaladin'i Suzhou Jwell.
Mandehana any Jwell
Notarihan'ny mpandefa an'i Jwell, ny mpanjifa manerantany dia nandeha tamim-pifaliana tany Jwell. Jwell dia nandamina bisy handefasana ny mpanjifa any Suzhou Jwell.
Sakafo atoandro mamy
Jwell dia nanomana sakafo atoandro mamy ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao, mamela ny namana rehetra tonga ao Jwell hanana traikefa ahazoana aina.
Tsidiho ny Jwell
Taorian'ny sakafo atoandro dia naka ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ny mpitsangatsangana an'i Jwell, nanao fampahafantarana mazava sy feno momba ny fitaovana isan-karazany ho an'ny mpanjifa, izay ahafahan'ny mpanjifa mahatakatra bebe kokoa ny fitaovan'i Jwell sy ny fanamboaran'i Jwell.
HIVERINACHINAPLAS2018 --- JWELL STYLE
NEXTCHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Masinina famolavolana herinaratra feno